Semalt: Olee otú iji jide n'aka na ebe nrụọrụ gị dị nchebe site na mbuso agha
Ịkwụsị ozi nkeonwe bụ ihe ịma aka na-arịwanye elu na ndị ọrụ ịntanetị. Naozi na - agụnye foto ndị a ma ama, ozi kaadị akwụmụgwọ, data gọọmenti, ID ID, na okwuntughe. Nke a pụtara naụwa nke hackers na-achịkwa ịntanetị na ọ bụla larịị. Ndị ọhụrụ nwere ike ọ gaghị aghọta otú enwere ike ịwụnye blọọgụ ma ọ bụ weebụsaịtị ha n'enweghịozi kaadị akwụmụgwọ. Otú ọ dị, ndị na-agba ọsọ, na-achọsi ike ime ka saịtị nondescript ghọọ ihe nledo nledo, na -ozi na-enweghị ihe ọmụma gị. Ọzọkwa, ha nwere ike mbanye anataghị ikike n'ime newbie saịtị databases na manipulate ma ọ bụ bibie data dị mkpa nainye obi njikọ ma ọ bụ nkesa nkesa hijack - best place to buy e cigs.
Lee nzọụkwụ dị mfe nke Michael Brown, onye ahịa na-ahụ maka ihe ịga nke ọma nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, ị nwere ike iji mee ka ndị omempụ na n'ọnụ mmiri:
Kasị njọ, melite ngwanrọ gị niile. Onye nwe ụlọ nwere ike hụ na ọ bụlangwanrọ ha na-eji eme ihe dị iche iche ma ọ bụrụ na etinyere weebụsaịtị ha ma ọ bụ site n'ịmepụta Ụlọ Ahịa Mee N'onwe nke atọnchịkọta turnkey. Ndị ọrụ CMS dị ka Joomla na WordPress na-arụ ọrụ mgbe niile ịhapụ mmelite na ntanetị oge, nke na-eme ka ngwanrọ ahụ dị ntakịrịenweghị nsogbu na hacks. Ya mere, jide n'aka na ị kwalite mmelite ma gbanyụọ mbipute kachasị ọhụrụ nke na-akwado ebe nrụọrụ weebụ gị n'oge niile.
Nke abuo, mepụta ihe nchebe gburugburu ebe nrụọrụ weebụ gị..Dị nnọọ ka ị na-agba ọsọantivirus tupu ị na-achọgharị weebụ na kọmputa gị, ị ga-enwerịrị usoro nchekwa, nke na-eje ozi dị ka ebe mbụ ị na-eche nchemegide mwakpo. Dịka ọmụmaatụ, Firewall Web Service bụ ihe nchebe dị mkpa. E bu n'uche inyocha okporo ụzọ na igbo ihe ọ bụlarịọ arịrịọ ma si otú a na-enye nchebe pụọ na njide agha siri ike SPAM, SQL injections na Cross Site Scripting.
Nke atọ, gbanwee gaa Protoper Transfer Protocol Secure (HTTPs). Http bụnkwekọrịta nkwukọrịta nchebe ejiri mee ka ị na-ebufe ọdịnaya mkparịta ụka n'etiti sava weebụ na ebe nrụọrụ weebụ. Usoro mgbakwunye na-agbakwụnye SSL(Secure Sockets Layer) na TLS (Transport Layer Security) gaa na Http saịtị wee zọpụta data na ndị ọrụ site na hacking ọgụ.
Na-esote, jiri paswọọdụ siri ike ma gbanwee ha mgbe niile. Enwere mmụbanke ndị agha kpụ ọkụ n'ọnụ bụ ndị na-echepụta aha njirimara na paswọọdụ. Iji okwuntughe siri ike mee ihenke na-amachibido mwakpo dictionary na oke ike. Ọzọkwa, okwuntughe siri ike, dị mkpa maka ha, nchekwa data na sava weebụ.
N'ikpeazụ, mee ka akwụkwọ ndekọ aha gị sie ike ịchọta. Hackers nweta ohereozi nke weebụsaịtị site na iji akwukwo ndi ozo na-abia. Ha nwere ike iji ihe ederede, nke nyochaa ntuziaka niile na weebụihe nkesa maka okwu ntinye dika 'nbanye' ma obu 'admin,' ma mebie nchebe gi site na itinye n'ime nchekwa ndi ahu. N'ihi ya, hụ nahọrọ aha nchekwa aha ha, nke ndị ọkachamara gị mara naanị iji belata nsogbu ndị nwere ike ime.
N'ikpeazụ, n'ime ụwa nke nchedo weebụ, enwere ike ịbanye ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla. Ịga nke ọmammegide na-emebi ihe data nke onye nwe ya na mgbakwunye na imebi ozi onye ọrụ. Ọzọkwa, mwakpo nwere ike ime ka Google na ndị ọzọnbudata ọchụchọ iji webline weebụ gị iji zere ịgbasa ozi ọjọọ na weebụ. Nọgide na-eche nche mgbe niile.Emezu ma ọ dịkarịa ala atọ isi nzọụkwụ nyere na isiokwu a iji zere ịbụ a lekwasịrị maka hackers.